कोरोना संक्रमित बढेसंगै लिस्बन सहित १० नगरपालिकामा फेरी लकडाउन, के के भए नियम परिवर्तन ? - VOICE OF NEPAL TV
४ असार २०७८, शुक्रबार ०१:१९
गणेश पाण्डेय, पोर्चुगल ।
पोर्चुगलमा निरन्तर कोरोना संक्रमितहरुको संख्या बढेसंगै सरकारले फेरी केही कडा नियम सहित लकडाउन गर्ने भएको छ। पछिल्लो समयमा राजधानी लिस्बनमा भारतीय प्रकृतिको डेल्टा भेरीयन्टको संक्रमण ह्वात्तै बढेपछि सरकारले लिस्बनलाई बढी कडाई गर्ने भएको छ।
राजधानी लिस्बनमा डेल्टा भेरीयन्टको सबैभन्दा बढी संक्रमण नेपाली समुदायमा देखिएको स्वास्थ्य महानिर्देशनालयले जनाएको छ। डेल्टा भेरीयन्ट समुदाय स्तरमा फैलिईरहेको र भारतीय समुदायभन्दा नेपाली समुदायमा ३ गुणाले बढी संक्रमण फैलिईरहेको स्वास्थ्य महानिर्देशनालयको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
राजधानी लिस्बनमा सप्ताहान्तमा लकडाउन: के के भए नियम परिवर्तन ?
राजधानी लिस्बनमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसंगै सरकारले सप्ताहन्तमा लकडाउन गर्ने घोषणा गरेको छ। राजधानी लिस्बन लगायत Albufeira, Arruda dos Vinhos, Cascais, Loulé, Sertã, Sintra, Sesimbra, Braga र Odemira मा टेलिवर्किङ र रिमोट वर्किङ नियम लागु गरिएको छ । यी नगरपालिकाहरुमा रेस्टुरेन्ट र क्याफेहरू बेलुका १०:३० बजे बन्द गरिसक्नुपर्नेछ। रेस्टुरेन्टको भित्र एउटा टेबलमा बढीमा ६ जना बस्नसक्नेछन् भने रेस्टुरेन्टको बाहिर खुल्ला स्थानमा बढीमा १० जनाको समूहमा सम्मिलित हुन सक्नेछन्।
त्यस्तै खाद्य र गैर खाद्य खुद्रा व्यापारहरु बेलुका नौ बजेसम्म मात्रै खुल्नेछन्। सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु रातको १०:३० बजे बन्द गरिसक्नुपर्नेछ। विवाह र बप्तिस्मामा क्षमताको ५० % मात्रै उपस्थित हुनसक्नेछन्। नागरिक सेवा कार्यालयहरुमा प्रतक्ष्य सेवा पुर्व निर्धारित अपोइण्टमेन्टको आधारमा मात्रै हुनेछन्। खेलकुदहरु दर्शक बिना मात्रै सम्पन्न गर्न सकिनेछ।
सरकारले सप्ताहन्तमा अन्य नगरपालिकाबाट लिस्बन महानगरपालिकाभित्र आवतजावत गर्न बन्देज गरेको छ। शुक्रवार दिउसो ३ बजेदेखि सोमवार बिहान ६ बजेसम्म लिस्बन महानगरपालिका क्षेत्रमा आवतजावत गर्नमा रोक लगाईएको छ।
यी माथिका १० नगरपालिका बाहेकका अन्य २६८ नगरपालिकाहरुमा १० जुनमा लागु गरिएको नियमहरु यथावत रहनेछन्। सरकारले यी नगरपालिकाहरुमा कोरोना संक्रमण दरको आधारमा हरेक दुई सातामा नियम परिवर्तन गर्नेछ।
एनआरएनए बेल्जियमको मतदानमा तोडफोड र झडप , केही घाइते , २ जना अस्पताल भर्ना ( भिडियो सहित )
एनआरएनए पोर्चुगल निर्बाचनः १४ पदका लागि ४३ जनाको उम्मेदवारी, कुन पदमा को- कसको भिडन्त ?
नेपालमा कोरोना : २७१४ जनामा कोरोना पुष्टि, थप २४ को मृत्यु